Stephanie McMahon vana - Sangana nemhuri yemukadzi mukuru weWWE - Wwe
Stephanie McMahon vana - Sangana nemhuri yemukadzi mukuru weWWE
Iyezvino Chief Brand Officer weWWE (aimbove chitsitsinho chakanyanya kunetsa kubva pachigaro cheGunya), Stephanie McMahon anga achingova tad anovhiringidza nebasa rake pachiratidziri.
Chitsitsinho chake chakasarudzika chinogara chakakandwa nepahwindo; pese paunoona RAW commissioner padivi neiyo huru babyface kana kunyatso kurapa Foley ne smidgeon yekuremekedza. Kunyangwe iye achifamba mutsetse wakasviba pakati pechiso nechitsitsinho (Zvichiri zvisiri parutivi neBig Show - Chitsitsinho / chiso shasha yenyika) asi chinhu chimwe ndechechokwadi - iro basa nyonganiso rinongoitika pane kamera. Muhupenyu chaihwo, Stephanie anokwanisa kubata akakosha mashandiro ekambani yeMiriyoni emadhora, kuenzanisa hupenyu hwemhuri, kugwinya uye kubata nezvinonetsa zvekufamba zvinodiwa zvinotora kuve hunhu hweWWE zvakanyanya.
Amai vevanasikana vatatu vakanaka, Stephanie akaita zvese kuti ave nechokwadi chekuti vave nehudiki hwakajairika.
Uyezve verenga: Chii chakakosha waStephanie McMahon?
Kubva pakuva nechokwadi chekuti angave baba kana baba, Paul 'Triple H' Levesque (Ane hunhu hwakanaka-bvudzi rebvudzi iro vanasikana vakagara nhaka) vanovasiya kuchikoro uye voedza kuvepo pakudya nguva dzese pavanenge vakatenderedza kusvika pakutarisira zvishoma zvinhu sekuchengeta zviso zvavo kunze kwemifananidzo ye Instagram.
Stephanie zvechokwadi anoedza kuvadzivisa kubva pameso ekutsvaira, kudzikisira kutaridzika kwevanhu kune hukama neWWE. Mifananidzo yevanasikana ishoma uye yakaoma kuuya nayo.
Zvakadaro, vanasikana mafeni makuru echigadzirwa icho vabereki vaviri vakadyarwa kwazvo, ivo vatsigiri vakuru vaStephanie - kunyangwe varipo vachimuona achirwa paSummerslam 2014, aripo kumashure kwekukwazisa mai vavo mushure meyechete-nguva mukwikwidzi wevakadzi in-ring inodzoka.
yakapusa muto ace mutengo wemhuri
Heano rumwe ruzivo nezve avo vatatu vanonakidza vanasikana veWWE's simba vaviri:
Uyezve verenga: Chii chakakosha mambure weTatu H?
Mukuru pane vatatu, Aurora akazvarwa pa24thyaChikunguru, 2006. Aurora yakasvika panguva yekuratidzwa kwepamoyo kweWWE's Raw, uye sekuru vatsva Vince McMahon vakafara zvekuti vakazivisa kuberekwa pamhepo. Vince zvakadaro hazvo aivewo nenyaya dzinoshamisa dzenyaya dzemazano apo Steph aive nepamuviri.
Professional Wrestling inogona kunge iri nyika isinganzwisisike uye dzimwe runyerekupe dzinoratidza kuti mamwe emafungiro aisanganisira Triple H kusave baba ve-pachiratidziri, nezvinhu zveyakaomarara electra kana kunyange Mutambo weZigaro zvataurwa.
Dzese idzi pfungwa dzakakurumidza kupfurwa naStephanie (yaive iine 'Hapana mukana mugehena' kana ndikakwanisa kutaura nziyo yaVinny Mac inozivikanwa).
Stephanie paakange ave pazera razvino raAurora, anga atove nechekuita nekambani - achibatsira nezvinhu zvekumashure kana aigona.
Murphy Claire Levesque &Vaughn Evelyn Levesque
Aurora Rose naMurphy Claire naambuya vavo
Mwana wechipiri uye wekupedzisira vakazvarwa kumurume nemukadzi veWWE mu2008 uye 2010 zvakateerana. Akataura zvakare chinonakidza chemwana wake wemakore matanhatu pamusangano wemitambo:
'Ini ndaingova ne' machisi 'nemwana wangu wemakore matanhatu (Vaughn). Akandiita kuti ndizivise kupinda kwake, ndichipinda kuimba yaKaty Perry nyowani, Simuka. Anonyatsozvinzwisisa zvese.
Stephanie Mcmahon zvirokwazvo chikamu chakakosha cheWomen's wrestling revolution iyo iri kuitika kuWWE.
Tinogona kuzviona zvichiita kwese kwese izvozvi; Sasha Banks naCharlotte vakagadzwa kuve vakadzi vekutanga kutora chikamu mugehena mumutambo weSero uyezve kuSmackdown Live! iro rista yevakadzi iri kuwana inoenderana nguva yechiratidziro yekuvandudza inonakidza feuds.
Ndinovimba kuti vanasikana vangu vanoona kuti unogona kuva mukadzi akasimba, ane chivimbo asingatyi kubuda uye kuve nezvakaitika zvitsva ... Ndiri kuratidza vanasikana vangu kuti mukadzi anogona kuita chero chinhu,
Stephanie agara aripo kuti afadze tarenda rake rechikadzi pa (Ringside yezvizhinji zveNXT Takeover specials ayo ainyanya kuitiswa nevakadzi). Steph anga aripedyo nekambani kwechinguva, iye akararama kuburikidza nenguva iyo yavaingova maDivas.
Iye anovavarira kuve akasimba wekuteedzera kune vana vake uye kuda kwake kwekambani zvirokwazvo kunotapukira. Pane mukana wakanaka wekuti tinogona kuona atleast mumwe wevanasikana achipinda muchindori mune ramangwana; semunhu ane chiremera kana kunyangwe seWWE Women's Champion.
11 makotesheni ekurangarira kana iwe uchinzwa kurasika muhupenyu hwako
Kune yazvino WWE Nhau, mhenyu kufukidza uye runyerekupe shanyira yedu Sportskeeda WWE chikamu. Zvakare kana iwe urikupinda chiitiko cheWWE Rarama kana uine ziviso yenhau kwatiri kutisiira email ku fightclub (pa) sportskeeda (dot) com.
25 zvinhu zvekuita kana iwe wabora
george lopez mambure akakosha 2020
handina zvandinofarira kana zvekuzvivaraidza nazvo
kupi kwekuyerera paw patrol
ndezvipi zvimwe zvinhu zvekuda nazvo
ndinonzwa sekuti handichazowana rudo zvakare